Pope Fransis oo kenya ugu baaqay nabad & dib u heshiisiin – Hiiraanxog.net
HomeWararka SoomaaliaPope Fransis oo kenya ugu baaqay nabad & dib u heshiisiin
26/11/2015 Hiiraan Xog Wararka Soomaalia 0
Baadariga Catholic-ga, Pope Francis, oo booqashadiisii ugu horeysay ee rasmi ah ku maraya qaaradda Afrika, ayaa ugu baaqay shacabka Kenya in ay ka shaqeeyaan nabadda iyo dib-u-heshiisiinta.
Pope-ka ayaa sidoo kale ka hadlay baahida loo qabo ilaalinta bii’adda, daryeelidda dadka saboolka ah iyo in si wanaagsan maalka loo gaarsiiyo dadka.
Shacab aad u faraxsan ayaa kusoo dhaweeyay garoonka diyaaradaha ee Nairobi.
Dalka Kenya ayaa la tacaalaya dhibaato kaga timid ururka Al-shabaab ee Soomaaliya fadhigiisu yahay iyo musuq maasuq baahsan.
Baadariga ayaa muddo 5 maalmood ah booqashadiisa ku mari doona dalalka Kenya, Uganda iyo Jamhuuriyadda Bartamaha Afrika.